Igama lesiqhelo: i-methylprednisolone (ngomlomo) (METH il pred NIS oh alone)
Igama lebrand: IMedrol, iMedrol Dosepak, iMethylPREDNISolone Dose Pack
Udidi lweziyobisi: Iiglucocorticoids
By Kendra Cherry; Ukuhlaziywa nguSanjai Sinha, MD. Igqityelwe ukuhlaziywa nge-14 kaDisemba ngo-2020.
Imethylprednisolone yi iyeza le-corticosteroid ethintela ukukhutshwa kwezinto emzimbeni ezibangela ukudumba.
I-Methylprednisolone isetyenziselwa ukunyanga iimeko ezahlukeneyo zokukrala ezinje nge isifo samathambo , lupus, ukhwekhwe, ukudumba okwenziwa sisilonda sikabhobhosi , ukuphazamiseka komzimba, i-gland (endocrine), kunye neemeko ezichaphazela ulusu, amehlo, imiphunga, isisu, inkqubo ye-nervous, okanye iiseli zegazi.
I-Methylprednisolone inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Akufanele usebenzise eli liyeza ukuba unentsholongwane yefungal naphi na emzimbeni wakho.
Ngaphambi kokuba uthathe i-methylprednisolone, xelela ugqirha wakho ngazo zonke iimeko zonyango, nangawo onke amanye amayeza owasebenzisayo. Zininzi ezinye izifo ezinokuchaphazeleka kukusetyenziswa kwe-steroid, kunye namanye amayeza amaninzi anokusebenzisana ne-steroids.
Amayeza e-Steroid anokuwenza buthathaka amajoni akho omzimba, akwenze kube lula kuwe ukufumana usulelo okanye ukonyusa usulelo osele unalo okanye osandula ukubanalo. Xelela ugqirha wakho malunga nokugula okanye usulelo okhe wanalo kwezi veki zidlulileyo.
Kuphephe ukuba kufutshane nabantu abagulayo okanye abanesifo. Fowunela ugqirha wakho ukuze ufumane unyango lokuthintela ukuba uthe wafunyanwa yirhashalala okanye imasisi. Musa ukufumana isitofu sokugonya 'bukhoma' ngelixa usebenzisa eli yeza. Isitofu sokugonya sisenokungasebenzi kakuhle ngeli xesha, kwaye sisenokungakukhuseli ngokupheleleyo kwizifo.
Sukuyeka ukusebenzisa i-methylprednisolone ngequbuliso, okanye unokuba neempawu ezingathandekiyo zokurhoxa. Thetha nogqirha wakho malunga nendlela yokuphepha iimpawu zokurhoxa xa uyeka iyeza. Nawuphi na ugqirha, ugqirha wamazinyo, okanye ingcali yezonyango engxamisekileyo ekunyangayo kufuneka uyazi ukuba uthatha amayeza e-steroid.
Akufanele usebenzise i-methylprednisolone ukuba u-aleji kuyo, okanye ukuba unayo:
usulelo lomngundo naphina emzimbeni wakho.
I-Methylprednisolone inokuwenza buthathaka amajoni akho omzimba, yenze kube lula kuwe ukuba ufumane usulelo. I-Steroids nayo inokulwenza lusuleleke usulelo osele unalo, okanye iphinde isebenze usulelo osele unayo. Xelela ugqirha wakho malunga nokugula okanye usulelo okhe wanalo kwezi veki zidlulileyo.
usulelo lwe-herpes ngamehlo;
izilonda zesisu, ulcerative colitis, okanye diverticulitis;
ukudakumba, ukugula ngengqondo, okanye isifo sengqondo;
isifo sesibindi (ngakumbi i-cirrhosis);
ingxaki yemisipha efana ne-myasthenia gravis; okanye
Xelela ugqirha wakho ukuba unesifo seswekile. Amayeza e-Steroid anokunyusa amanqanaba eglucose (iswekile) egazini lakho okanye kumchamo. Kuya kufuneka ukuba uhlengahlengise idosi yesifo seswekile.
Akwaziwa nokuba eli yeza liza kulwenzakalisa usana olungekazalwa. Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukukhulelwa.
Ayaziwa nokuba i-methylprednisolone idlula kubisi lwebele okanye ukuba inokuchaphazela umntwana owanyayo. Tshela ugqirha wakho ukuba uncelisa.
Ndingayithatha njani i-methylprednisolone?
Thatha i-methylprednisolone ngokuchanekileyo njengoko kumiselwe ngugqirha wakho. Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho kagqirha. Ugqirha wakho ngamanye amaxesha unokutshintsha idosi yakho. Sukusebenzisa eli yeza ngesixa esikhulu okanye esincinci okanye ixesha elide kunokuba kucetyisiwe.
Ngamanye amaxesha iMethylprednisolone ithathwa yonke imihla. Landela imiyalelo yonyango yakho ngokucophelela.
Izidingo zakho zedosi zingatshintsha ukuba unoxinzelelo olungaqhelekanga njengokugula kakhulu, umkhuhlane okanye usulelo, okanye ukuba uqhaqho okanye imeko yongxamiseko. Tshela ugqirha wakho ngayo nayiphi na imeko ekuchaphazelayo.
Eli yeza kunokubangela iziphumo ezingaqhelekanga kunye neemvavanyo ezithile zonyango. Xelela nawuphi na ugqirha okunyangayo ukuba usebenzisa i-methylprednisolone.
Akufanele uyeke ukusebenzisa eli yeza ngesiquphe. Landela imiyalelo kagqirha wakho malunga nokucofa idosi yakho.
Nxiba ithegi yokulumkisa ngonyango okanye uphathe ikhadi lesazisi elichaza ukuba uthatha i-methylprednisolone. Nawuphi na umboneleli onyango ophatha kufuneka azi ukuba uthatha amayeza e-steroid.
Ukuba ufuna utyando, xelela ugqirha ngaphambi kwexesha ukuba usebenzisa eli yeza. Kuya kufuneka uyeke ukusebenzisa iyeza okwexeshana.
Biza ugqirha wakho ngemiyalelo ukuba uphose idosi.
Ukugqithisa kwemethylprednisolone akulindelwanga ukuba kuvelise iimpawu ezisongela ubomi. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwexesha elide kwamayeza aphezulu e-steroid kungakhokelela kwiimpawu ezinje ngokuncipha kolusu, ukugruzuka ngokulula, utshintsho kubume okanye indawo yamafutha omzimba (ngakumbi ebusweni bakho, entanyeni, emqolo nasinqeni), ukunyuka kwamabala amabala okanye iinwele zobuso, iingxaki zokuya esikhathini, ukungabi namandla, okanye ukuphulukana nomdla kwisini.
Kuphephe ukuba kufutshane nabantu abagulayo okanye abanesifo. Fowunela ugqirha wakho ukuze ufumane unyango lokuthintela ukuba uthe wafunyanwa yirhashalala okanye imasisi. Ezi meko zinokuba nzulu okanye zibulale nabantu abasebenzisa amayeza e-steroid.
Musa ukufumana isitofu sokugonya 'bukhoma' ngelixa usebenzisa i-methylprednisolone. Isitofu sokugonya sisenokungasebenzi kakuhle ngeli xesha, kwaye sisenokungakukhuseli ngokupheleleyo kwizifo. Amayeza okugonya aphilayo aquka imasisi, uqwilikana, irubella (MMR), ipoliyo, irotavirus, ityhefu yomlomo, umkhuhlane omthubi, i-varicella (irhashalala), kunye nogonyo lwempumlo (umkhuhlane).
Iziphumo ebezingalindelekanga zemethylprednisolone
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo Iimpawu zokungabikho komzimba kwi-methylprednisolone Imingxuma ukuphefumla nzima; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
ukuphefumla okufutshane (nokuba unamandla amancinci), ukudumba, ukutyeba ngokukhawuleza;
ukutyumka, ulusu olucekeceke, okanye naliphi na inxeba elingapholiyo;
ukungaboni kakuhle, umbono wetonela, iintlungu zamehlo, okanye ukubona iihalos ezijikeleze izibane;
ukudakumba okunzima, utshintsho kubuntu, iingcinga okanye isimilo esingaqhelekanga;
intlungu entsha okanye engaqhelekanga engalweni okanye emlenzeni okanye emqolo;
izitulo ezinegazi okanye zokulibala, ukukhohlela igazi okanye ukugabha okujongeka njengendawo yekofu;
ukuxhuzula (ukuxhuzula); okanye
potassium ephantsi - iinyanda zomlenze, ukuqhina, ukubetha kwentliziyo ngokungaqhelekanga, ukubetha esifubeni sakho, ukwanda kokoma okanye ukuchama, ukuba ndindisholo okanye ukurhawuzelela.
I-Steroids inokuchaphazela ukukhula kwabantwana. Tshela ugqirha wakho ukuba umntwana wakho akakhuli kwinqanaba eliqhelekileyo ngelixa usebenzisa eli yeza.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-methylprednisolone zinokubandakanya:
ukugcinwa kolwelo (ukudumba ezandleni okanye emaqatheni);
isiyezi, ukujikeleza imvakalelo;
utshintsho kwixesha lakho lokuya esikhathini;
iintlungu ezinobunzima okanye ubuthathaka; okanye
isisu esibuhlungu, ukudumba.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela imethylprednisolone?
Amanye amachiza anokunxibelelana ne-methylprednisolone, kubandakanya amayeza kunye neyeza zokuthenga, iivithamini kunye neemveliso zamayeza. Xelela umboneleli wakho ngamnye wezempilo malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo ngoku kunye nawaphi na amayeza owaqalisayo okanye owayekayo ukuwasebenzisa.
Kutheni le nto uYonsa ethathwe ngemethylprednisolone?
I-Yonsa isetyenziswa ngokudibeneyo ne-methylprednisolone ukunyanga umhlaza we-Prostate kuba i-methylprednisolone inceda ukuthintela iziphumo ebezingalindelekanga ze-Yonsa ezibangelwa yi-mineralocorticoid excess.
Unyango ngeYonsa lunokubangela ukuba i-mineralocorticoid igqithise, enokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezifana noxinzelelo lwegazi (uxinzelelo lwegazi), i-hypokalemia (i-potassium esezantsi) kunye nokugcinwa kolwelo. Qhubeka nokufunda
yintoni impefumlo kaSathana
Khumbula, gcina oku kunye nawo onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise i-methylprednisolone kuphela kulwazi olumiselweyo.
Olona hlobo liyi-antibiotiki losulelo lomqala obuhlungu
np iziphumo ebezingalindelekanga ze-thyroid
amagama e-magnesium salicylate amagama
I-valsartan 80 mg yeziphumo ebezingalindelekanga
zeziphi i-antibiotics ezinyanga uti
Iziphumo ebezingalindelekanga kwi-prednisone
dlulisa uluhlu lokudlala lwe-iTunes ukuze ubone